Baraasiil oo u caal weeyday bukaannada uu soo ridanayo COVID19 | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN Baraasiil oo u caal weeyday bukaannada uu soo ridanayo COVID19
Baraasiil oo u caal weeyday bukaannada uu soo ridanayo COVID19
Baladweyne(HNN)- Dalka Baraasiil oo uu ka dillaacay feyraska Korona ayaa noqday dalka afraad ee diiwaan geliyay tirada bukaannada ugu badan dunida ee uu xanuunku soo rito.
Masuuliyiinta caafimaadka dalkaas ayaa shaaciyay in Sabtidii oo qudha ay diiwaan geliyeen 14,919 bukaan oo uu markaasi haleelay xanuunka, taas oo tirada guud ka dhigeysa 233,142.
Dadka ilaa hadda dalkaad ugu geeriyooday xanuunka COVID19 ayaa lagu qiyaasay 15,633 qof, taasoo macnaheedu yahay in ay Baraasiil tahay dalka shanaad ee dhanka geerida xanuunka.
Khubarada ayaa sheegaya in tirada rasmiga ah ay aad uga badantahay midda haatan la soo bandhigay, taasoo ay ku sababeeyeen in aanu dalkaasi ka jirin baaritaan ku filan oo lagu ogaado dadka qaba xanuunka Korona.
Duqa magaalada Sao Paulo, Bruno Convas oo ah magaalada ugu dadka badan dalkaas ayaa ka digay in xaaladdu faraha ka baxdo, maadaama adeegga caafimaad ee magaaladaasi uu qarka u saaranyahay in uu gabi ahaanba dumo. Isaga oo sheegay in barasaabka gobolka uu kala hadli doono sidii gabi ahaanba magaalada loogu soo rogo Bandow habeen iyo maalin ah.
Previous articleDAAWO: Wasaaraddo ka tirsan xukuumadda Federaalka oo lagu helay musuqmaasuq
Next articleWasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo maamulka gobolka Banaadir oo kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danyarta